ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိူးသမီးများအဖွဲ့ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
-ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်ရဲ့ အမျိူးသမီးများ အားလုံး တခုတစည်းထဲ စုဝေးနိုင်ရန်
-ဆိုဒ်အတွင်းရှိ အမျိူးသမီးဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်
နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှု= Dec 20, 2016
စတင်ရေးသားခဲ့သူ နီစံ (အနီ). ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးချက် မှာ နန်းယု Jan 21, 2013.2Replies 1 Like
အဘိ=သာလွန် ထူးဆန်းသော ,ဓမ္မာ=တရား…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
စတင်ရေးသားခဲ့သူ နီစံ (အနီ). ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးချက် မှာ နီစံ (အနီ) Dec 25, 2011.5Replies 1 Like
ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိူးသမီးများအဖွဲ့ သို့အဖွဲ့ဝင်ပြီးမှ မှတ်ချက်များကိုရေးသားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
မေဖြူအိမ့် သည် ဖေဖော်ဝါရီ 25, 2014 က 2:33amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ဓမ္မမိတ်ဆွေ ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူး
တာတာ သည်ှဧပြီ 8, 2013 က 3:25pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ayeaye သည် ဇန်န၀ါရီ 27, 2013 က 7:06pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
minn naing သည် ဇန်န၀ါရီ 27, 2013 က 11:40amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
zawmintun သည် ဇန်န၀ါရီ 24, 2013 က 12:10amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ကျနော်လဲဗုဒွ့ဘာသာ အမျိူးသမီးအဖွဲကိုအလည်လာရောက်လာပါပြီ အဖွဲဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုလိုလဲဝမ်းသာပါတယ်
အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) သည် ဇန်န၀ါရီ 23, 2013 က 2:10pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ကို အလည်လာတာပါ...ဦးဇင်းတို့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးတွေသာလျှင် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကို အပြည့်အစုံရတာပါ..။ တချို့ ခရစ်ယာန်သီလရှင်တွေဆိုရင် လူထွက်ခွင့်မရဘူး...။ အစ္စလာမ်မှာကျတော့ ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်..။ အမျိုးသမီးကို ကလေးမွေးရုံသက်သက်လောက်ပဲ သဘောထားကြတာ။ ဟိန္ဒူဆိုရင်လည်း အိန္ဒိယသမိုင်းကိုလေ့လာရင် သိနိုင်တယ်...။ ထားပါ... ဒါက ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးဟာ ဗုဒ္ဓနည်းကျနေထိုင်ရင်း အကျင့်တရားဘောင်ကို လှမ်းနိုင်သလောက်လှမ်းကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်... ဒီဘ၀မှာ တရားထူးမရရင်တောင် အနည်းဆုံးတော့ အထောက်အပံ့ဖြစ်တာပေါ့...။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ပြီးတော့ တရားတော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုမခံစားရရင် ရှုံးလိမ့်မယ်......
အားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ...
ကိုကျော်သန်း သည် ဇန်န၀ါရီ 10, 2013 က 6:24pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
အဖွဲဝင်အဖြစ် ဝင်ခွင်ရတာ ကျေုးဇူးတင်ပါတယ်
ရှင်ပညာဇောတ သည် နိုဝင်ဘာ 18, 2012 က 2:35pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
အားလုးံပဲမင်္ဂလာပါနော် မြန်မာ အမျိုးသမီးများပီသနိုင်ပါစေ
wai mon သည် စက်တင်ဘာ 17, 2012 က 11:31amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာလည်း ဝမ်းလည်းသာ ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်ရှင်။ ဗုဓ္ဓဘာသာမြန်မာမိန်းကလေးများကိုလည်း မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကို အလေးထားစေချင်ပါတယ်ရှင်။အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး စိတ်၏ကျန်းမာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ...........
ရှင်ပညာဇောတ သည် ဇူလှိုင် 19, 2012 က 4:45pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ကောင်းမှုတွေပြုတဲ့လူတွေအချင်းချင်းပဲ ခွဲခြားမနေပါနဲ့ ကိုရင့်ကိုလဲ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လက်ခံပေးနော် အားလု့ကိုမင်္ဂလာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်